नेपाल आज | ‘नेपाली कम्युनिस्टको धर्म भनेको होली वाइन हो’ (भिडियोसहित)
‘नेपाली कम्युनिस्टको धर्म भनेको होली वाइन हो’ (भिडियोसहित)
- विजयराज भट्ट, पूर्वडिआइजी, नेपाल प्रहरी
यो देश कसले बिगारेको हो ?
मैल ३२ वर्ष देशको सेवा गरेँ । ६२ सालमा सेवानिवृत्त भएको हो । सेवा निवृत्त भएपछि मैले आफूलाई अध्यात्म र समाजसेवामा लगाएको थिएँ । र विगत केही समययता देशको अवस्था नाजुक भएको जस्तो लागिरहेको छ । जेष्ठ नागरिकको नाताले पनि अब हामीले पनि बोल्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । देश जोगाउनका लागि हामी अहिले क्रियाशील भएका छौं । नेपालको अवस्था २०२७ देखि नेपालको अर्थतन्त्रको मैले अध्ययन पनि गरिहेको छु । २७ देखि ४६ सालसम्म देशमा भ्रष्टाचार कम थियो । राजाले वहालवाला मन्त्रीलाई नै जेल हालेका पनि थिए । उनी बितिसकेका छन् । ती मन्त्री । उनी वनमन्त्री थिए, घटना ४४ सालको कुरा हो । वनको काठ अनियमितता गरेको अभियोगमा जेल हालिएको थियो ।
पञ्चायतकाल त वनमाराहरुका लागि स्वर्णयुग थियो नी ?
त्यो बेला टिम्बर कर्पोरेसनमार्फत जनताले काठ पाउँथे । काठ सस्तैमा पाइन्थ्यो । त्यसपछि भ्रष्टाचार सुरु भएको चाहिँ २७ सालदेखि नै हो । मेरो कार्याकालमा लागू औषधका ठूलो अपराधीहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो । अर्बौका कारोबार गर्नेलाई पनि मैले पक्राउ गरे । करोडौंको अफर अस्वीकार गरेर पक्राउ गरेँ ।
मैले पक्राउ गरेपछि अदालतले पनि २० वर्ष जेल सजाय तोक्यो । तर ४८ सालमा नेपालका राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुगे र उनीहरुले त्यस्ता ठूला अपराधीहरुलाई मुक्त गरिदिए ।
तर अहिले हेर्नुस् वाइड बडी भ्रष्टाचार, एनसेल भ्रष्टाचार, मेलम्ची भ्रष्टाचार, बुढीगण्डकी भ्रष्टाचार, फोरजी भ्रष्टाचार जस्ता काण्ड कुनै पनि करोडका छैनन् । अर्बका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले त भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्नु भएको छ त ?
उहाँले त भन्नु हुन्छ नी । उहाँकै मातहतका सचिव गजेन्द्र ठाकुले मेलम्चीका बारेमा के भन्नु भएको थियो उहाँलाई त्यो थाहा छैन ? संसदको समितिले वाइड बडीमा भएको भ्रष्टाचार उहाँले किन देख्नु भएन ?
तपाईं पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचार कम थियो भन्नु हुन्छ । पञ्चायतकाल राम्रो भएको भए जनताले बहुदल किन रोज्थे ?
नेपालको १७ सालयताको गहन अध्ययन गरौं न । म ४० सालमा अस्कलमा पढ्थेँ । त्यो बेला नेपालको बजेट ८४ करोड थियो । त्यति पैसाले सबै काम सकेर विकास गर्नु पथ्र्यो । सबै उद्योग त्यही बेलाको हो । ४० उद्योग बेचेर खाए । पृथ्वी, शिद्धार्थ, अरनिको, महेन्द्र राजमार्ग बने ।
अहिले १५ खर्बको बजेट तुलना गरेर हेरौं । २ हजारवटा विकासका ठेक्कामा २० प्रतिशत अग्रिम ठेक्का लिएका थिए । ती मध्ये १२ सय ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्थाछ । १० करोडको ठेक्का लिँदा १ करोड नेताहरुलाई बाँड्ने र एक करोड खाने चलन छ । ठेक्काको पैसाबाट विकास निर्माण गर्ने त चलन नै हरायो । काम नै नगरी करोडपति हुन सकिन्छ नेपालमा । यसरी गएको पैसा ५२ अर्ब छ ।
सिंहदरबारमा दश बीस लाखको सोलर प्यानल भिख माग्छन् । तिब्बतमा कन्सुलेट अफिस चीनले २९ करोडमा बनाइदियो । यता फिल्म फेयर अवार्ड गर्न १ अर्ब दिन खोजियो, मदर मुनका लागि होली वाइन पर्वमा १२–१५ करोड खर्च गरियो । यसरी फजुल खर्च त कति हो कति छ ।
ठेक्काको २० प्रतिशत ठेकेदारलाई सुरुमै दिइन्छ । १० करोडको ठेक्कामा ठेकेदारले २ करोडको अग्रिम पाउँछन् । अर्थात कामै नगरी उनीहरु करोडपति बन्छन् । यस्तो अग्रिम रकम ५२ अर्ब बाँडिसकिएको छ । काम भएको छैन । यसरी बाँडिएको रकम नेता, कर्मचारीमा बाँडचूँड हुन्छ । विदेशी फिल्म फेस्टिबल लगाउन १ अर्ब दिइनै सकिएको थियो । मदर मुनको होली वाइन पर्वमा १५ करोड खर्च भयो । भएको पैसा यसरी उडाउने संयन्त्रले सिंहदरबारमा १०–२० लाखको सोलर प्यानलमा चीनसँग भिक्षा माग्छ । तिब्बतमा कन्सुलेट अफिस बनाउन भिक्षा मागेको थियो ।
अहिले नेताहरु कोही सिंगापुर, कोही दुवईमा मानसिक शान्तिका लागि गइरहेका छन् । अध्यात्म र भौतिकको सन्तुलन नै शान्ति हो । कम्युनिष्टका लागि धर्म अफिम होइन, होली वाइन रहेछ भन्ने थाहा पाइयो नी त ।
तपाईं नेपालमा विदेशीले यहाँका नेता कर्मचारी खरिद गरेका छन् भन्नु हुन्छ, कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?
विदेशीले त खरिद गर्छन् । नेपालका नेताहरु पश्चिमाको ट्रयापमा परेका छन् । जासुसी संस्थाको छ सात वटा नीति हुन्छ । उनीहरुले शरुमा नेता कर्मचारीलाई खरिद (बाइ) गर्छन् । त्यसपछि दलाली (बार्गेनिङ) गर्छन् । त्यसपछि ब्लाक मेल गर्छन् । त्यसपछि विभिन्न आरोप लगाएर चरित्र हत्या, राजनीतिक करिअर सिध्याइदिन्छन् भनेको नमानेको खण्डमा । त्यसपछि उसको सम्पत्ति रोक्का, खोसुवा गर्छन् । त्यसपछि स्याक अर्थात भौतिक रुपमा समाप्त पार्छन् । जसरी ओसमा बिन लादेन, कर्णेल गद्दाफी, सद्दाम हुसैनको हविगत भयो ।
नेपालमा ठूला खतरा छ । जातीय र धार्मिक दंगा फैल्याउन पश्चिमाहरु लागि परेका छन् । नेपाल टुक्रयाउने तयारी पनि छ । पश्चिमाको रणनीति भनेको नेपाललाई वार फिल्ड बनाउने नै छ ।
हामीलाई पश्चिमाले किनिसकेका छन् । राष्ट्रियता संरक्षणका लागि हामीले नेतालाई खबरदारी गर्नुपर्छ । चीन र भारतबाट हामीलाई कुनै खतरा छैन ।
नेपाली नेताको राष्ट्रियता सक्कली होइन रे नी त ?
नेतामा त म राष्ट्रियता देख्दिनँ । राष्ट्रियता भएका त राजा वीरेन्द्र थिए । राजा महेन्द्र थिए । नेपाल बनाउने पृथ्वीनारायण शाह हुन् । राजाहरुले देश नजोगाएको भए पश्चिम नेपाल उत्तराखण्डमा हुन्थ्यो । नारायणीपूर्व बिहार र पश्चिम बंगालमा हुन्थ्यो । नारायणी पश्चिम उत्तरप्रदेशमा हुने थियो । देश त जोगाएका हुन नी होइन ? राजा महेन्द्र सच्चा राष्ट्रवादी थिए । उत्तरी भेगमा भारतीय आर्मी थियो । राजा महेन्द्रले भारतीय फौज हटाइदिए । नेपाली फौज राखे । अमेरिकासँग पनि राजा महेन्द्रले टक्कर लिए । खम्पा विद्रोह दमन गरिदिए । अमेरिकाले हतियार दिएर तिब्बतविरुद्ध विद्रोह गराएका थिए । तर राजा महेन्द्रले सबलाई ध्वस्त पारिदिनु भयो । त्यो विद्रोहको नेता वाङदीलाई समेत नेपाली सेनाले मारिदियो ।
राजा महेन्द्रले अरु जातजातिको संस्कृति नामेट पारेको अभियोग पनि लाग्छ नी ?
प्रत्येक जातीको संस्कृति, भाषाको संरक्षण हुनुपर्छ । कुनै जातीविरुद्ध त्यस्तो अत्याचार भएको भए आजसम्म कति वटा जातीय दंगा भइसक्थे । कुनै जातीले अर्को जातीलाई आजसम्म जातकै आधारमा मारेको छैन । यस्तो राम्रो सहिष्णु सामाज बनाउने काम त राजाहरुले गरे नी । बरु अहिलेका नेताहरुले हेर्नुहोस् त के गरे ?